Mashandisiro anoita nzvimbo muIOS 9 | IPhone nhau
Mazuva iwayo akapera kare apo isu taidzima uye paGPS yefoni yedu zvichienderana nekuti tashandisa TomTom kana Google Mepu kana kwete kudzivirira bhatiri redu kubva kudzikira. Nzvimbo dzekushandira dzave kuita sekukosha sekubatana kwedata, uye nekuwedzera uye nekuwedzera mashandiro uye mashandiro ehurongwa anoda kuitiswa Iko kuvandudzwa mukujeka kwenzvimbo yedu uye yakaderera bhatiri yekushandisa nekuda kwekushandisa matekinoroji matsva kuona nzvimbo yedu yakabvumidza smartphone yedu kuziva nzvimbo yedu uye kunyange kutarisira zvatinoda, ichitipa izvo isu zvatichada maererano nenzvimbo yedu kunyangwe pamberi izvo zvatinokumbira. Ndosaka zvakakodzera kuti umbomira zvishoma kuti uzive mashandiro enzvimbo idzi uye zvavanotipa..
1 Ndeapi maSevhisi masevhisi
2 Kuisa iyo Nzvimbo
Ndeapi maSevhisi masevhisi
Ivo vanoshanda tisingatombozviziva isu, kumashure, nguva dzose vanoshanda, vachiongorora imwe neimwe yematanho atinotora kuti tizive kwatiri kuenda, inguvai yatiri munzvimbo dzipi uye nezvatinogara tichiita mazuva ese. Zvikanzi seizvi, zvinogona kutotyisa kuti iPhone yedu inoziva zvese izvo nezvedu, asi ndiyo chete nzira inogona kutibatsira. Yedu smartphone yatove kupfuura foni kubva kwaunosheedza, tumira WhatsApp uye utarise Facebook. Apple, Google, Samsung… vese vanoda kuti iwe uve mubatsiri wedu, uye senge chero munhu anozviremekedza mubatsiri wega, anofanira kuziva patiri chero nguva.
Asi usavhunduke, nekuti Apple inoisa mumaoko edu sarudzo dzekudzora izvi, uye kunyangwe paine chokwadi chekuti rese iri dhata nezvenzvimbo yedu (sekureva kwaApple) harisiye mudziyo wedu kana rinoshandiswa chero chimwe chinangwa kunze kwekutipa. mazano kana kushandisa iwo mabasa atinoda, Tinogona kugara tichienda kumasystem ehurongwa kuti tipe mvumo kune izvo chete zvatinoda.
Kuisa iyo Nzvimbo
Zvirongwa zveApple zvinotibvumidza isu kunyatso kudzora nzvimbo uye mashandisiro echitatu-bato, kusanganisira iyo system yacho, vanogona kuishandisa. Mukati meZvirongwa> Zvekuvanzika> Nzvimbo isu tine bhatani rakajairika iro rinoita kuti ibudise nzvimbo munzvimbo yayo yose, asi hazvikurudzirwe kuti zvimiswe nekuti tingave tiri kutambisa mabasa anonakidza kwazvo. Nekudaro, zvishoma zvishoma pasi, isu tine sarudzo dzekumisikidza idzo dzakakodzera kuziva kuziva mashandisiro avo nemazvo.
Chikamu che "Govera nzvimbo yangu" chinotibatsira kuti titaure hurongwa kana tikabvumira kugovana nzvimbo yedu nevamwe vanhu., senhengo dzemhuri yedu. Uye zvakare, inotibvumidzawo kuti tigadzirise kubva kune chishandiso chatinoigovana nayo, chero bedzi iine imwechete ID yeICloud. Saka tinogona kumuudza kuti agovane kubva kuPadad yedu kuti haatombobva pamba, uye chero munhu paanoda kutarisa patiri, imba yedu ichaonekwa senzvimbo, kunyangwe isu tiine iyo iPhone kune imwe nzvimbo.
Pazasi peiyi sarudzo isu tine gadziriso pane chishandiso. Isu pachedu tinogona kubvumidza kunyorera kushandisa kwedu nzvimbo, ine sarudzo dzinoverengeka dziripo:
Usambofa - Haugone kuwana nzvimbo yacho
Kana ikashandiswa: iwe unongova nekugona chete kana iko application iko pachiratidziro kana rimwe remabasa ayo iri
Nguva dzose: unogona kuishandisa kunyangwe iri kumashure
Izvo zvakakosha kuti uve nechokwadi chekuti ndeapi maapplication anowana uye ndeapi asina, kunyanya kana tichitaura kune vechitatu-bato kunyorera kuti dzimwe nguva, kunyangwe Apple ichidzora, vanoita zvisina kukodzera kushandiswa kwenzvimbo.
Pakupera kweiyo runyorwa rurefu tinowana iyo Sisitimu masevhisi, mabasa eIOS anoshandisa nzvimbo uye iyo yatinogona zvakare kudzora. Kushambadza uye nguva yenguva mabasa ayo muzviitiko zvakawanda asina basa zvachose uye atinogona kuita tisina, kana kufanana neKeKeKit, inotengeka zvachose kana usina chero zvinowirirana zvinoenderana.
Pakupedzisira isu tine mukana we gadzirisa iyo sisitimu kuitira kuti nguva yega yega nzvimbo painoshandiswa icon inowoneka munzvimbo yemamiriro, inobatsira kuchengetedza izvo smartphone yedu inoita.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 9 » Mashandisiro anoita nzvimbo muIOS 9
Bose SoundLink Mini II, yakanaka, yakanaka uye isinganyanye kudhura mutauri weBluetooth